प्रयत्न गर्दा राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ भने जिम्मेवारी बढ्न सक्छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। विशेष भेटघाटले काममा उत्साह बढाउला । सामाजिक दायित्व हातलागी हुनेछ । मध्याह्नपछि श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ भने प्रतीक्षा गरिएको लाभांश प्राप्त हुनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा उठाउन सकिनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ ।
परिस्थितिवश विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा थकान महसुस हुनेछ । अरूको बारेमा चासो लिँदा व्यर्थै झमेला बढ्न सक्छ । उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। चुनौती देखिए पनि स्थितिलाई सहज बनाउन सकिनेछ । साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनाले अधुरो काम बन्नेछ । शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले नयाँ काम पनि सुरु हुनेछ ।
कामको चाप बढ्नेछ । प्रक्रिया नपुग्नाले बनिसकेको काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ । अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला। समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । काम पूर्ण नभए पनि मिहिनेतले लाभ दिलाउनेछ । प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि मध्याह्नपछि प्राप्त हुनेछ । व्यापारतर्फ पनि दिगो फाइदाको काम बन्नेछ । कीर्तिमानी काम बन्नाले मूल्यवान् वस्तु लाभ हुन सक्छ ।
साथीभाइको सहयोगले काममा हौसला जाग्नेछ । रमाइला क्रियाकलापमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्नुका साथै मान–सम्मान प्राप्त हुने समय छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ । मनग्गे अर्थ लाभ पनि हुनेछ । मध्याह्नपछि स्वास्थ्यमा कमजोर हुनाले काम रोकिन सक्छ । खर्च लागे पनि आयस्रोत सबल हुनाले आवश्यकता पूरा हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे लाभ हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ । परिस्थितिको अनुकूलताले प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । पुरुषार्थी काम सिद्ध गर्ने समय छ। साँझतिर प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ ।
प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले नयाँ काममा अलमल हुनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न केही विलम्ब हुनेछ । तापनि मिहिनेत गर्दा उपलब्धि हातलागी हुनेछ । मध्याह्नपछि स्थितिमा सुधार आउनेछ भने सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ । मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। कृषि क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान हासिल गर्न सकिनेछ ।
साथीभाइसँग सम्बन्ध चिसिनाले समस्या उत्पन्न होला । काम बिग्रने डरले सताउनेछ । बेसुरमा दिइएको वचनले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ । अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ । महत्त्वपूर्ण योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला । मध्याह्नपछि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । स्वास्थ्यबाधा हुनाले काममा लामो समय जुट्न नसकिएला । बुद्धिको उपयोगले मात्र लाभ दिलाउनेछ ।
साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ । प्रतीक्षित नतिजाले पनि उत्साह जगाउनेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । कामको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने लगनशीलताले विशेष अवसर दिलाउनेछ। रोकिएका काम बन्नुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ । मध्याह्नपछि भने आफन्तसँग विवाद हुने र काममा धोका पाइने सम्भावना देखिन्छ । मनको डरले सताउन सक्छ ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भ
प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिनेछ । बोली–व्यवहारमा अलि सजग रहनुपर्ला । सावधान नहुँदा हातबाट लक्ष्मी बाहिरिने सम्भावना देखिएकाले कर्जा र उधारो व्यापारमा चनाखो रहनुपर्नेछ । मध्याह्नपछि आयस्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम सुरुवात हुनेछ । नियमित काममा साबिकजस्तै फाइदा भइरहनेछ । आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला ।
ठूला व्यक्तिहरूसँग मतभेद रहनेछ । अवसर जुटे पनि ठूलो उपलब्धि हातलागी नहुने देखिन्छ । विवादास्पद कामको जिम्मेवारी आउनाले केही समस्या आइपर्ला । आवेशको निर्णयले काम बिग्रन सक्छ । तापनि बाहिर आलोचना गर्नेहरूले व्यवहारमा अवसर प्रदान गर्नेछन् । परिस्थितिवश सामान्य काममा बढी अलमल हुनेछ । साँझतिर वादविवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ, सजग रहनुहोला ।
अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका हुनेछ । भैपरी आउने खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभाव देखापर्न सक्छ । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउनेछ । खर्च लागे पनि लामो यात्रा सम्भावना छ । टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढाउने समय छ । मध्याह्नपछि आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य र सुमधुर सम्बन्धका लागि सजग रहनुहोला ।
व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। सञ्चित धनको उपयोगले फाइदा हुनेछ । प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । प्रतीक्षा गरिएको काम बन्नेछ । मध्याह्नपछि खर्चको मात्रा बढ्नेछ । खाँचो टार्न कर्जा समेत लिनुपर्ला । धनमाल बाहिरिने समय रहेको हुँदा सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ । परिस्थितिवश आफन्तबाटै टाढिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
वि.सं. २०७७ असार २४ बुधवार (इ.स. २०२० जुलाई -८)